10 Xaqiiqo Oo U Gaar Ah Filmka Darr Oo Inta Badan Dadka Wax Ka Ogeyn (+Sawiro) – Filimside.net
10 Xaqiiqo Oo U Gaar Ah Filmka Darr Oo Inta Badan Dadka Wax Ka Ogeyn (+Sawiro)
February 18, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: February 18, 2018
Darr waa film jaceyl ah oo ay wada jileen Shah Rukh Khan, Sunny Deol iyo Juhi Chawla waxaana Director iyo Producer ba ka ahaa Yash Chopra oo kamid ah Filmsameyaalka ugu wanaagsan taariikh ahaan.
Filmkaan waxaa la daawaday 24 December sanadkii 1993 waxaana idiin heynaa 10 xaqiiqo oo u gaar ah filmkaan sido kalena laga diiwan galiyay.
Maxay Yihiin Hadaba Xaqiiqooyinka Bal Si Aan U Wada Ogaano Halkaan Hoose Aan Ka Wada Akhrino:
Xaqiiqada 1aad: Wareysi laga qaaday Filmsameye Yash Chopra hada kahor waxuu ku sheegay in Mr.Prefectionist Aamir Khan uu u bandhigay doorka laadar nimo ee filmkaan balse Aamir waa iska diiday doorkas maadama uusan xiligaas rabin inuu shaashada kaga soo muuqdo isagoo kaabo laadar ah waana sababta ugu weyn ee uu udiiday filmkaan, waxaana xusid mudan Yash Chopra markuu sidaa lahaa inuu ak joogay Uday Chopra oo ah wiilkiisa.
Xaqiiqada 2aad: Doorka Rahul Mehra ee ah nin jaceyl si khaldan ku raadinayo waxaa loo bandhigay doorkas xidigo badan kahor inta uusan SRK qaadanin.
Yash Chopra isla wareysigaas waxuu ku sheegay in uu doorkas uu u bandhigay xidigo badan sida Sanjay Dutt iyo Ajay Devgan balse doorkas qof walba ma jecleesan waxaan ugu dambeyn calaf u yeeshtay SRK.
Xaqiiqada 3aad: Rugcadaa Rishi Kapoor buugiisa la magac baxay Khullam Kulla ee arimo badan uu daaha oga qaaday waxuu ku sheegay in filmka Darr loo bandhigay labada door ee ay wada jileen Sunny Deol iyo Shah Rukh Khan balse uu iska diiday labadaas doorba. Waxaa kalo uu Rishi sheegay inuu Yash Chopra ugu baaqay inuu doorka Rahul Mehra uu u dhiibo SRK maadama uu sheegay inuu ku haboon yahay waayo Rishi SRK bandhigisa filmka Deewana ay isla sameyeen ayuuba la dhacay.
Xaqiiqada 4aad: Sunny Deol waa filmka kaliya ee uu shirkada Yash Raj Films u sameyay waxuna xidigan wareysi ku sheegay in la qayaamay ayadoo doorkisa wax badan laga jaray halka doorka SRK waxyaabo badan oo aan heshiiska kujirin lagu soo daray.
Xaqiiqada 5aad: YRF ayaa Suuny wiilkisa Karan Deol inee soo caan bixiyaan isku dayeen balse Sunny wuu kadiiday isagoo xasuusan taariikhdii ay ku dhigeen sanadkii 1993 waxuuna sheegay in uusan aamin ku qabin lagana yaabo wiilkisa inee hagar daameyan waxuuna kabaha u gashtay inuu isla isaga film usameyo wiilkiisa halka YRF usameyn lahaayen.
Xaqiiqada 6aad: Yash Chopra oo filmkaan iska lahaa sido kalena uu caawinaayey wiilkiisa Aditya Chopra waxay si rasmi ah u qirteen in waligod aysan la rabin filmkoda Darr inuu sameyo Shah Rukh Khan.
Maadama ay ka aaminsanaayen in uusan kasoo bixi Karin doorkan waxaana dhacday inee atoorayaal fara badan doorkan u bandhigen balse markii ay dhamaan jilayaashas iska diiden aye SRK u bandhigen ayagoo aan ku qanacsanen waxan xusid mudan in SRK doorkisa uu kaga yaabsaday shacab weynaha India wixii markaas ka dambyey Yash Chopra waxuu bilaaway inuu marwalba raadsado SRK si uu filmadiisa ugu sameyo halka uu awal ka leex leexan jiray.
Xaqiiqada 7aad: Shah Rukh Khan xiliyadaas waresi laga qaaday waxuu ku sheegay in uusan Darr ku ogolaanin sameyntiisa rabitaan uu isaga rabay doorkas ama inuu xirfadaas tijaabiyo balse uu ku ogolaaday markii la waayey qof kale oo sameyo doorkas iyo inuu xushmad u haayo mudane Yash Chopra.
Xaqiiqada 8aad: Aamir Khan waxuu wareysi ku sheegay in uusan marnaba Darr diidi lahen ee uu isaga dhaafay mashruucan inuu dib u dhac ku imaanayey iyo suaalo badan oo ay saxaafada la daba kacday waxuuna goaan ku gaaray inuu isaga dhex baxo mashruucan waayo waxaa lala daba kacay laadar ayuu jilaa iyo wax noocas ah mashruucina dhaqaaq maleh oo dhaqsi lama duubeynin xiligaas .
Xaqiiqada 9aad: Uday Chopra oo xiligaas xaadir ahaa marka Darr la duubayey aabihiisna garab siinayey ayaa asna wareyso lala yeeshtay xiligas waxuuna sheegay in Aditya Chopra uu sheekada filmkaan keenay.
Balse uu kasoo xigtay filmka Hollywoodka ah ee Dead Calm waxana xusid mudan in Aditya filmkaan necbanaan jiray inuu daawado balse waxaa ku qasbeen inuu daawado Uday Chopra iyo Hritik Roshan kadib marka uu daawaday ayuu la dhacay aabihiis ayuuna u bandhigay sida Uday shaaciyay waxana xusid mudan in Aditya, Uday iyo Hritik xiligaas saaxibo ahaayen waqtina isla qaadan jireen xili walba.
Xaqiiqada 10aad: Magaca filmkaan waxaa laga soo xigtay riwaayad yar ama film yaree uu hada kahor sameyay Hritik Roshan waxaana kasoo xigtay Aditya Chopra sida uu hada kahor wareysi ku cadeyay.
Waxaa Aqrisay 1,536